Yini ingaphambili elifinyeziwe futhi lisebenza kanjani | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Impela, uma uvame ukubuka isimo sezulu kuthelevishini, uzwile ukuthi kunezinhlobo eziningi zezinhlaka. Okokuqala, sithola ingaphambili elifudumele, bese kuthi elinye elibandayo nelinye elingajwayelekile libizwe i-occlud ngaphambili. Uhlobo ngalunye lwangaphambili lunezici ezahlukahlukene nezimo zemvelo ezidingekayo ukuze lwenzeke. Ingaphambili elivalekile liyingxube yezingqimba ezibandayo nezifudumele.
Ngabe ufuna ukwazi okwengeziwe ngezingqimba zesimo sezulu? Kule ndatshana sizochaza konke mayelana ne-occluded front nomehluko nokunye.
1 Yini ngaphambili?
2 Izinhlobo zangaphambili
2.1 Ingaphambili elibandayo
2.2 Ingaphambili elifudumele
2.3 Ibunzi elivalekile
2.4 Phambili okumile
Ngaphambi kokwazi izinhlobo zangaphambili, ukwakheka kwazo nemiphumela yesimo sezulu, kubalulekile ukwazi ukuthi yini ingaphambili. Uma sikhuluma ngokuza kwangaphambili nokuthi kuzoletha isimo sezulu esibi, sisuke sibhekise kukho isiqeshana lapho izindimbane zomoya zamazinga okushisa ahlukene zehlukene khona. Lezi zingqimba, uma kubhekwa izinga lokushisa lomoya ngamunye nokuthi iyiphi ehamba ngokushesha okukhulu, singawahlukanisa abe yizingqimba ezibandayo, ezishisayo, ezivalekile nezimile.
Igama langaphambili lakhishwa olimini lwamasosha. Lokhu kungenxa yokuthi, lapho izindimbane zomoya zihlangana, zikhiqiza imisebenzi efana naleyo evame ukwenzeka empini. Kukhona ukuduma nge izivunguvungu zikagesi, izivunguvungu ezinamandla zomoya nezimvula ezinkulu.
Ukusebenza kwalezi zingxenye kunqunywa ikakhulukazi ngokuguquguquka kwengcindezi yasemkhathini. Isethi yamanani engcindezi yomkhathi esiwathola endaweni ngokuya ngenani lezinkumbi zomoya nezinga lokushisa kwazo kubizwa ngezinhlelo zokucindezela komkhathi. Lezi zinhlelo zokucindezela ziholwa yimisinga yomoya, ngoba umoya uvamise ukuya endaweni lapho kunengcindezi enkulu eya lapho kuncane khona.
Amaphethelo angathinteka yi-morphology yendawo. Ukufuduka komoya kuphazanyiswa izintaba eziphakeme kanye namanzi amaningi. Kulezi zimo, amandla okuguquka nokuvela kwezingqimba kushintsha ngokuphelele.
Sizohlaziya uhlobo ngalunye lwangaphambili ngokuya ngezici zalowo nalowo nokuthi zehluka kanjani ngokuya ngokuhlukahluka konke kwesimo sezulu.
Le ndawo ebandayo idalwa umucu lapho sithola khona ukungazinzi komkhathi. Kubangelwa ukuthi isisindo somoya obandayo yiso esihamba ngaphezu kwesisindo somoya oshisayo. Lapho umoya obandayo uqhubekela phambili uhlangana nomoya ofudumele, kuba nohlobo oluthile lwesigaxa lapho lungena ngaphansi komoya ofudumele. Umoya obandayo unabantu abaningi njengoba unezinga lokushisa eliphansi ngakho-ke, njengoba unesisindo esithe xaxa, uvama ukwehla futhi uhlale esikhaleni esiseduze kakhulu nomhlaba.
Ngakolunye uhlangothi, umoya oshisayo, ungaminyene kakhulu, ithathelwa indawo kalula phezulu futhi ikhuphuke ngokuphakama. Lapho umoya oshisayo ukhuphuka futhi usezingqimbeni eziphakeme ezinokwehla kwamazinga okushisa angaphansi kwezingu-0 degrees, kubangela umoya ukuba ujiye, kuphakamise amafu asathuthuka aqonde mpo. Yilawa mafu angaletha ukuphazamiseka emkhathini njengezihlambi futhi ahambisane nemimoya enamandla. Ekuphakameni okuphezulu kuzoba neziphepho zeqhwa.
Njengoba indawo ebandayo iya phambili, sizithola sisendaweni enomswakama kakhulu futhi uma isidlulile, imvamisa ishiya indawo eyomile. Lapho ingaphambili elibandayo liqhubekela phambili, lidala ukwehla okukhulu kwezinga lokushisa. Ngokuya ngendawo esikuyo nesikhathi sonyaka okwenzeka ngaso, ingaphambili elibandayo livame ukuhlala phakathi kwezinsuku ezinhlanu nezingu-5 ubuningi.
Ingaphambili elifudumele yileli lapho umoya oshisayo uqhubekela phambili ukushintsha umoya obandayo. Ngokuvamile, lapho i-front efudumele iqhubekela phambili, ishiya umzila wamazinga okushisa aphakeme nomswakama. Ukwanda kwalezi zinto eziguqukayo kudala ukuthi ingcindezi yasemkhathini yehle, ngakho-ke kuzoba nezimvula ezingekho kakhulu. Kungenzeka ukuthi ezinye izimvula noma ukuvunguza komoya kungadala iziphepho, uma indawo ikuvumela.
Ngakolunye uhlangothi, kuvame kakhulu ukubona ifayela le- inkungu emoyeni obandayo lapho kuqala ingaphambili elifudumele.
Manje sizoqhubeka nokuchaza ngaphambili okukhohliwe kakhulu noma okungaziwa kakhulu kubo bonke. Futhi ukuthi ngaphambili okuvalekile kungashiwo ukuthi kuyinhlanganisela yakho kokubili. Ukuze lolu hlobo lwangaphambili lwenzeke, kufanele lube khona ingaphambili elifudumele elihamba kancane lilandelwe ngaphambili elibandayo elihamba ngokushesha. Uma lokhu kwenzeka, umoya obandayo ushaya lowo oshisayo bese uwuphushela phezulu ngoba uhamba ngejubane elingaphezulu.
Kungaleso sikhathi lapho izinhlaka zombili ziqhubekela phambili zihamba zilandelana. Umugqa owakha futhi uhlukanise yomibili le mimoya yilokho okubizwa ngokuthi i-front occluded. Ngokuvamile, lolu hlobo lwemingcele luhlotshaniswa ne- izinhlobo zamafu njengezintambo futhi zihambisana nemvula elula. Imvamisa zakha ezindaweni ezinengcindezi ephansi nalapho lezo zindawo zibuthaka.
Kumephu yesimo sezulu, uzokwazi ukubona ukumakwa kwengaphambili elivalekile ngoba zimakwe umugqa onamachashazi ansomi. Lokhu kusho ukuthi izimpawu zangaphambili elibandayo nalezo ezishisayo yilezo ezikhomba ukuholwa kokuhamba ngaphambili.
Ekugcineni, sizohlaziya umphambili omile. Kungumngcele okhona phakathi kwezixuku ezimbili zomoya. Ngamunye isisindo somoya siqine njengaleso, ngakho-ke futhi asinakususa noma sishintshe esinye. Singathola izinhlobonhlobo eziningi zezimo zomkhathi ngasemuva okumile. Izimvula ezijwayeleke kakhulu nezulu eligubuzele.
Ngemuva kwezinsuku ezimbalwa, zombili izinhlangothi ziyahlakazeka noma zibe yindawo efudumele noma ebandayo. Lezi zindawo ezimile zivame kakhulu ngesikhathi sasehlobo. Imvula ende ehlobene nazo ibangela izikhukhula zasehlobo.
Ngiyethemba ukuthi ngalolu lwazi ungafunda ngephambili elivelisiwe nokwehluka kwalo kokunye.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Izimo zezulu » Ibunzi elivalekile